Su'aalaha La Weydiiyo - Kingsine Electric Automation Co., Ltd.
S: 1. Immisa waddan ayaa illaa iyo hadda laga dhoofiyey KINGSINE?
J: Wax soo saarka sumadda 'KINGSINE' ayaa si guul leh loogu adeegay macaamiisha in ka badan 70 dal oo adduunka ah, oo ay ku jiraan ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, GE iwm.
S: 2. Waa maxay waqtiga ugu horeeya ee dhalmada?
J: Waxay kuxirantahay tirada amarka iyo xiliga aad amarka siineyso.Si caadi ah waxaan kusoo rari karnaa 7-15 maalmood gudahood tiro yar, iyo kudhowaad 30 maalmood tiro badan.
A: MOQ waa 1 go'an. Fadlan si xor ah u nala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
S: 4. Waa maxay habka rarka?
J: Waxaa lagu diri karaa hawo ama warqad dhambaal ah (UPS, DHL, TNT, FEDEX, EMS, SF Express iyo ect) ama xitaa badda. Fadlan nala soo xiriir ka hor intaadan amarada bixin.
S: 5. Waa maxay muddada bixintaada la aqbali karo?
J: T / T iyo L / C marka la arko waa shuruudahayaga lacag bixinta ee caadiga ah.
S ： 6.Hor intee le'eg tahay muddada dammaanadda?
A：Waxaan bixinaa 3-sano oo damaanad ah dayactir bilaash ah iyo dayactir nolosha-dheer ah.
S: 7. Waa maxay faa'iidooyinkaagu?
J: KINGSINE wuxuu ku takhasusay baaritaanka iyo cabirka korontada muddo ka badan 21 sano. Fikradda naqshadeynta All-in-One, culeyska awoodda sare & saxnaanta wax soo saarka sare laakiin leh qiimo-wax-ku-ool sare, 3-sano dammaanad dayactir bilaash ah iyo dayactir nolol-dheer ah.
S: 8.Waa maxay kala duwanaanta arjiga ee sheyga?
J: Noocyada 'KINGSINE brand Relay Test Sets' waxaa lagu soo bandhigayaa iyadoo ay si buuxda u shaqeynayaan taxanaha gobolka, Harmonic, tijaabada dib u soo celinta, Khadka kala duwanaanta, Fogaanta, Xadgudubka, Zero sequencer, Ramping, Tilmaamaha Awoodda, Heerka kala duwan, Kala duwanaanshaha Harmonic, Iswaafajinta, Kala duwanaanshaha Busbar, Imtixaanka Soo noqnoqda, Imtixaanka Dv / Df, iwm.
S: 9.Waa kuwee carwooyinka aad waligaa ka soo qayb gashay?
J: Sannad kasta KINGSINE ugu yaraan ka qaybgal bandhigyada 7-8 adduunka oo dhan, sida IEEE, Korontada Bariga Dhexe, FIEE, Elecrama, Exporcentr, Hannover, Power-Gen, Utility toddobaadle iyo wixii la mid ah.
Tijaabada gudbinta, Tijaabiyaha gudbinta Ilaalinta Fogaanta, Tijaabiyaha Relay Ilaalinta, Tijaabiyaha gudbinta sirdoonka, Imtixaanka gudbinta Dijital ah, Tijaabiyaha gudbinta farqiga u dhexeeya, Dhammaan Alaabooyinka